Ny minisitry ny raharaham-bahiny izao no milaza fa manana fahefana hiaro ny sisin-tany ny firenentsika kanefa tsy maintsy mila ny frantsay hanampy amin'ny fiarovana. Mbola hita taratra izay fiankinan-doha izay indrindra fa amin'ny tafika izay isan'ny marika amin'ny fiandrianam-pirenena.
Amboarina anefa tsy hita izay fiovana hita amin'ireo sisin-dalana eto an-drenivohitra amin'izao. Toa vao maika fanakorontanana ny fifamoivoizana no hita indrindra fa eny amin'ny faritra be mpivezivezy toy ny eny Anosibe. Soloin'izy ireo vy ratsy endrika avokoa ireo rarivato mba napetraka hanatsaràna ny tanàna. Hatreto dia tsy fantatra mazava izay handefasana ireo vato ireo ary mandeha ny feo fa halefa any La Réunion mba hanaovana ny lalam-baovao any an-toerana izany.
Tsy mbola nampihatra ny fampidinana ny vidin-tsolika ireo kaompanian-tsolika hatramin'ny omaly. Nandeha anefa ny feo fa efa ahena 300 ariary ny litatry ny solika manomboka amin'ity volana jona ity. Hatreto anefa tsy mbola hita taratra izay fidinana izay. Ny feo mandeha aza dia tsy faly ny mpandraharahan-tsolika ary mitady ny hitokona. Mihenjana tanteraka izany ny tady
NIANJERA TAMIN’NY MOTO
Olona roa no nianjera tamin’ny moto lehibe teo Mahamasina, amin’ny andro alina ary samy tsy nahatsiaro tena sy naratra mafy. Betsaka ny nanakiana fa tsy mitandrina izy ireo kanefa rehefa nozohina dia olona handeha hividy fanafody maika be ho an’ny havany izay niditra hopitaly tao Befelatanana. Kinanjo izy roa indray no nidiran-doza noho ny hamehana.
Miaina anaty horohoro tanteraka Ambohijanaka sy ny manodidina azy. Misesy loatra ny fanafihana eny an-toerana. Tokantrano roa indray no nasesin’ireo valo lahy izay mitam-basy tamin’ny faran’ny herinandro teo. Lasa avokoa ny vola, ny solosaina ary izay firavaka tao an-trano. Mba tsy nitifitra ireo jiolahy rehefa nanaiky ny baikony ny olona izay notafihana. Ity tanàna iray ity dia amin’ny dimy ora hariva dia efa mody avokoa ny olona ka manidy trano.
MBOLA TSY HITA POPOKA 5 TAONA ATY AORIANA
Tsy hita izay misy an’i Owne Alek hatramin’izao. Dimy taona taty aoriana mbola tsy fantatry ny havany na velona izy na maty. Tamin’ny 2014 dia efa naloan’ny fianakavian’ity karàna ity ny vola izay notakian’ireo jiolahy kanefa tsy navotsotr’ireo ihany i Owne Alek. Taty aoriana indray dia nasiana vola 40 tapitrisa ariary izay natokana ho an’ireo olona afaka manome vaovao hahitàna ity karàna ity, mbola tsy nahomby hatrany izany. Tsy mbola kivy ny havany ary mbola manantena ny hahavelomany.
Zandary roa izay handeha hanatitra taratasy fampiantsoana tany Didy Ambatondrazaka no niharan’ny fitsaram-bahoaka. Nandrasan’ny olona efa maherin’ny zato izay nitora-bato avy hatrany izy ireo. Voatery nanao tifi-danitra ireo zandary mba hanavotana ny ainy. Nitory ny zandary ary ato ho ato dia ahiana ny hisian’ny bemidina ao an-toerana mba hisamborana ireo olona izay nandratra azy ireo.
ADY AMIN’NY FAMPIHOROHOROANA
Solontenan’ny ministeran’ny raharaham-bahiny iray no handray anjara amin’ny ady amin’nyfampihorohoroana ara-nokleary sy baomba atomika andiany faha-11 na “Initiative Globale de la lutte contre le terrorisme nucléaire” izay hotanterahina any Buenos Aires, Argentine, ny alarobia 5 ka hatramin’ny 7 jona izao.
SINTO MAHERY MIHARO VONO OLONA
Araka ny vaovao nampintain’ny mpitandro filaminana eo Antaninandro, misy jiolahy miandry an-kendritohina manomboka amin’ny 11 ora alina amin’ny faritra Andravoahangy ambony midina any ambany mandalo amin’ny imprimerie de Madagascar iny. Efa manana ny paik’ady sy ny velam-pandrika ireo polisy ao amin’ny kaomisaria ao amin ’ny Boriborintany faha-3.
VAKY TRANO SABOTSY NAMEHANA
Tratra ambodiomby namaky trano ny lehilahy iray, omaly maraina sahabo ho tamin’ny 8 ora sy sasany maraina. Nianika tamboho ity olon-dratsy ity rehefa lasa namonjy fiangonana ireo tompon-trano ka nanafatra ny manodidina mba hanatanteraka ny velam-pandrika. Efa ikohizana amin’ny asa ratsiny izy io ka nihaodihaody teny amin’ny manodidina ary izao vao tra-tehaka.